China Cantaloupe ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-ebu ya | Ihe nketa
Ọhụrụ egusi Hami sitere na mpaghara Xinjiang site na ngosipụta nke Geographical.
Cantaloupe dị ụtọ ma na-edozi ahụ.
Ihe oriri nke ihe nketa na-eme ka kantuloupe a mịrị amị na mkpụrụ osisi dị elu dị elu site na oyi na-atụnye na mmiri sirop dị ala, hụ na acidity na pụrụ iche na-esi ísì ụtọ na nke pụrụ iche.
Mkpụrụ osisi a mịrị amị bụ nri siri ike nke jupụtara na antioxidants, vitamin, na mineral. Antioxidants a na-eje ozi nke kantaloupe a mịrị amị na-enyere ahụ aka ịkwụsị radical free nke nwere ike imebi sel ndị dị mma.
Melon Cantaloupe na-eme ka nri na-enye ume ọhụrụ n'oge ọkọchị, o nwekwara ihe ndị na-edozi ahụ nke pụrụ ịbara ahụ ike mmadụ uru.
Ihe a ma ama na ụmụaka na ndị okenye, cantaloupe nwere ike ịme nri ụtọ na-enye ume ọhụrụ, na-enye ahụ ike, ma na-adị mfe n'oge okpomọkụ, ebe ọdịnaya ha dị elu na-enyere aka igbochi akpịrị ịkpọ nkụ.
Typedị mkpụrụ a nwekwara ọtụtụ vitamin, mineral, na antioxidants.
Aha ndị ọzọ maka kantaloupe gụnyere muskmelon, mush melon, melon rock, na melon Persia. Ha bụ ndị ezinụlọ Cucurbitaceae, ya na mmanụ a alongụ nke mmanụ a honeyụ, anyụ, na kukumba.
Mmiri, antioxidants, vitamin, na mineral na kantaloupe nwere ike inye ọtụtụ uru ahụ ike.
Dịka ọmụmaatụ, antioxidants nwere ike inye aka igbochi mmebi sel nke nwere ike ibute kansa na ọnọdụ ahụike ndị ọzọ.
N'oge metabolism, ahụ na-emepụta mkpụrụ ndụ na-adịghị agbanwe agbanwe a na-akpọ free radicals, nke nwere ike ịnakọta n'ime ahụ ma mebie mkpụrụ ndụ. A maara mmebi a dị ka nrụgide oxidative. Antioxidants na-enyere aka wepu free radicals na ahụ ma gbochie nrụgide oxidative.
Kasị Na-ere China Mịrị Cantaloupe, Cantaloupe akpọnwụwo, Anyị na-asọpụrụ onwe anyị dị ka ụlọ ọrụ nke mejupụtara otu ndị otu ọkachamara siri ike bụ ndị na-agbanwe agbanwe ma nwee ọfụma na azụmaahịa mba ụwa, mmepe azụmaahịa na ọganihu ngwaahịa. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ nọpụrụ iche n'etiti ndị na-asọmpi ya n'ihi ogo ya dị elu na arụmọrụ, yana arụmọrụ ya na mgbanwe ya na nkwado azụmahịa.
“Dabere n’ahịa ụlọ ma gbasaa azụmaahịa esenidụt” bụ atụmatụ mmepe anyị maka Sịngị Ahịa Kachasị Ahịa Tropical Mkpụrụ Mmanya Mịrị Mịrị Cantaloupe Mpekere, Anyị nọ na nche maka ịtọlite ​​obere mkpakọrịta azụmaahịa ogologo oge na gị.
Nke gara aga: strọberị
Osote: Mandarin oroma